ब्याजदर विवाद | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर ब्याजदर विवाद
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको जन्म २००६ सालमा स्याङ्जाको पुरानो सदरमुकाम नुवाकोटमा भएको हो । २०२८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमए, २०३१ सालमा बीएल गरेका क्षेत्री २०३८ सालमा युनिभर्सिटी अफ न्यू इङ्ल्याण्ड आरमिडेल अष्ट्रेलियाबाट कृषि अर्थशास्त्रमा एमयाक गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर काम गरेका थिए । त्यस्तै उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा २०६५ माघ ३ देखि २०६६ साउन ११ गतेसम्म गभर्नर थिए ।
विश्वसनीय बैङ्किङ सेवाको आवश्यकता
अर्थतन्त्रमा बचतकर्ता र सम्भावित लगानीकर्ताबीच मध्यस्थता गर्ने काम बैङ्क वित्तीय संस्थाको हो । बचत परिचालन गरी बचतकर्तालाई ब्याज र अन्य बैङ्किङ सुविधा प्रदान गर्नु पूँजी सञ्चयको आकर्षण हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नियामक संस्था केन्द्रीय बैङ्कबाट निर्देशित हुन्छन् । नेपालमा केन्द्रीय बैङ्क स्थापनाअघि नेपाल बैङ्कले कारोबार थालेको हो । शुरुआत त्यसरूपमा भएका कारण हाल पनि कतिपय अवस्थामा वाणिज्य बैङ्कहरू केन्द्रीय बैङ्कलाई पछि पार्दै गतिविधि बढाउन लालायित देखिन्छन् । प्रविधिको प्रयोगको क्षेत्रमा केन्द्रीय बैङ्कको तुलनामा बैङ्क वित्तीय क्षेत्र अगाडि देखिन्छन् । शाखारहित बैङ्किङ कार्यान्वयनमा ल्याइसक्दा नियामक संस्थासँग सोसम्बन्धी नीति बनेकै थिएन । तर, हालका दिनहरूमा बैङ्क, वित्तीय क्षेत्रमा विस्तार भएको कार्यक्रम, गतिविधिउपर केन्द्रीय बैङ्क चनाखो रहने गरेको छ । नियमनको सम्बन्धमा गरिएका कतिपय निर्देशनहरूलाई वाणिज्य बैङ्कहरूका गतिविधिमा सूक्ष्म चासो राखेको भनी गुनासो पनि गरेको पाइन्छ ।
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तरलाई भने निश्चित अङ्कभित्र राख्दा बैङ्किङ प्रणाली स्वस्थ रहन्छ भन्ने सन्देश केन्द्रीय बैङ्कले दिने गर्‍यो । अन्य विषयमा पनि सरकारको नीतिनियम केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन प्रतिकूल नहुने गरी बैङ्क वित्तीय संस्था स्वनियमनमा चलून् भन्ने अपेक्षा नियामक संस्थाको रह्यो । खुकुलो नीतिको फाइदा उठाउन खोज्ने बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैङ्कको नियमनकारी भूमिकाबाट प्रभावित भएका छन् । खारेजीमा पर्ने निक्षेप सङ्कलन कर्जा प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने कामबाट त्यस्ता संस्थाको गतिविधि सुधार्ने चेष्टा नभएको होइन ।
वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै यस्ता संस्था नितान्त निजी प्रतिष्ठान हुन् भन्ने धारणा प्रबल हुँदै गयो । सीमित धनराशी लगानी गरी असीमित निक्षेप सङ्कलन गरी लगानीबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्ति हुर्क्यो । खास गरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा हुने मुनाफा बैङ्किङ क्षेत्रका लगानीकर्तामा भेद हुन छाड्यो । कयौं गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेपको बैङ्क वित्तीय क्षेत्रमा अहम् भूमिका छ भन्ने कुरा नियामक संस्थाले सम्झाउनुपर्ने अवस्था आयो । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा पूँजी संरचना नेपालका बैङ्क वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर रहेको सन्दर्भमा पूँजीवृद्धिको योजना आयो । विद्यमान पूँजी संरचनामा वृद्धि गर्न छोटो समय तर रकम न्यूनतम चारगुणा दिइएकाले वित्तीय क्षेत्र विविध उपाय सुझाउन लागे । मूलतः बोनस शेयरको प्रावधान मुख्य रह्यो । यसले नगद लाभांश पाउने स्थिति ट¥यो । सोबापत बजारमा जाने रकम बैङ्कमा नै अड्कियो । लगानीयोग्य रकमलाई त्यति फरक नपारे पनि पूँजीवृद्धिले हिजोकै स्तरको मुनाफा प्राप्त गर्न थप लगानी आवश्यक पर्ने भयो । बैङ्कहरू निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहबीचको अन्तर ख्यालै नगरी नाफाका लागि लगानी बढाउनपट्टि लागे । परिणाम निर्धारित प्रतिशत पूँजी निक्षेप कर्जा अनुपात कायम राख्न गाह्रो प¥यो । उक्त अनुपात ८० प्रतिशत नाघेपश्चात् केन्द्रीय बैङ्कले जरिवाना गर्ने कुरा भयो । अर्कोतर्फ निक्षेपकर्तामा सन्देह जाग्ने भयो कि आफ्नो निक्षेप सुरक्षित त छ ?
तरलताको उतारचढाव बैङ्किङ क्षेत्रले बेहोर्दै आएको निरन्तर परिघटना हो । हालै उत्पन्न तरलता अभावको परिस्थिति विप्रेषण अपवाहमा घट्दो स्थिति सरकारी विकास खर्च समयमा नहुनु, खर्चालु स्वभावका कारण मानिसहरू दैनिकीका लागि बैङ्कमा नगद नराख्ने जस्ता प्रवृत्ति औंल्याइयो । बैङ्कहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी गरेका कारण थप लगानी गर्न नसकेको तर्क पनि बाहिर आयो । समस्या समाधानका लागि सरकारले विकासका निम्ति खर्च गर्न नसकेको रकम वाणिज्य बैङ्कहरूमा जम्मा गर्ने र लगानी गर्नेजस्ता कच्चा प्रस्ताव पनि भए । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्क सो प्रस्ताव सकारात्मक भएको सन्देश पनि प्रवाह भयो । तर, सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएर अव्यावहारिक किन थियो भने बैङ्कहरूले लगानी गरिसकेपछि सरकारलाई चाहिएको बेला फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो । केन्द्रीय बैङ्कले अन्तर बैङ्क ब्याजदर बढी नभएको ब्याजदर करोडौंको अध्ययनबाट पनि तरलता अभाव नरहेको तर्क सार्वजनिक गरे । बैङ्क वित्तीय संस्था भने कर्जा दिन बन्द भयो भन्दै लामो समयका लागि लगानीयोग्य रकम खोज्दै रहे । बैङ्कहरूको संस्था बैङ्कर्स एशोसिएशनले भद्रसहमति भनी बचत र मुद्दतीमा निश्चित रकमभन्दा बढी ब्याज कायम नगर्ने निधो गरेको सन्देश प्रवाह गर्‍यो । बैङ्कहरूले ३/४ वर्षअघि लगानी गरेका यातायातका साधन, घर निर्माणका कर्जामा दोब्बर ब्याज लाग्ने जनाउ ऋण दिए ।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले विक्रीमूल्यको सूचीमा ब्याजदर पनि समावेश गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा एक्लै वा सामूहिक रूपले प्रतिस्पर्धाविरुद्ध सम्झौता गर्न नहुने किटानी गरेको छ । प्रतियोगिता सीमित वा नियन्त्रण गर्ने कार्य कसुर भनिएको छ । यस्तो कार्यविरुद्धको मुद्दा सरकारवादी हुने दफा २६ ले व्यवस्था गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रस्तावनामा बैङ्क वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । दफा ५० को १को ‘ज’मा संस्थापक एकआपसमा मिली अन्य किसिमको नियन्त्रण अभ्यास गर्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त दुवै ऐनको मर्मलाई सङ्घले निर्ममतापूर्वक कुल्चेर स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रन खोज्ने बैङ्कलाई अनुचित दबाबमा पारेको छ । त्यसैले कालान्तरमा यसले अर्थतन्त्रलाई खौलामा हाल्ने कर्तुत हुन सक्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा सिण्डीकेट हुँदैन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड तथा
पूर्वडेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
बैङ्किङ व्यवसाय केन्द्रीय बैङ्कबाट इजाजत लिएर गरिने अत्यन्त संवेदनशील व्यवसाय हो । प्रतिस्पर्धात्मक रूपले आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने व्यवसायमा पर्ने भएकाले यो व्यवसायमा सिण्डीकेट हुन हुँदैन । ऐनले कहीँकतै सिण्डीकेट हुने विषय लेखेको पनि छैन । बरु सिण्डीकेट नहोस् भनेरै ऐनको प्रस्तावनामा नै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बैङ्किङ सेवा दिनुपर्ने लेखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५० मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मिलेर कुनै सार्वजनिक हित नहुने किसिमको र आफ्ना ग्राहकलाई मार्का पार्ने एकाधिकार र नियन्त्रणमुखी कुनै काम गर्न पाइँदैन भन्ने उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धा कतिपय अवस्थामा अस्वस्थ पनि हुन सक्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैङ्किङ क्षेत्रमा झन् एकदमै खतरनाक हुन्छ । त्यसबाट जोगिन बैङ्किङ क्षेत्रमा सम्बन्धित सबैले आआफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । अहिले बाहिर आएको कुरा नआउनु पर्ने विषय हो । कैयौं विषय समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रको हितका लागि पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता विषय बाहिर ल्याइराख्नुपर्ने नहुन पनि सक्छन् ।
संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरेर नियमनकारी निकायको भूमिका र अन्य सड्ड्घसंस्थाले आआप्mनो भूमिका निर्वाह गर्दा यस्ता विवाद स्वतः निरुपण हुनेछ । यदि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो भने त्यसलाई नियमनकारी निकायले हेर्नेथ्यो नै । वित्तीय संस्थामाथि हुने कारबाही या त यसका ग्राहकले गर्ने हुन् या त नियमनकारी निकायले । यस्ता विषयले समग्र बैङ्किङ क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ । सर्वसाधारणको विश्वासमा चल्ने वित्तीय क्षेत्रमा यस प्रकारको लडाइँले जहिले पनि नोक्सान नै पु¥याउँछ । यसर्थ जतिसक्दो चाँडो यस्ता विषय टुङ्ग्याउन जरुरी छ ।
निक्षेपकर्ताले उचित ब्याजदर पाउनुपर्छ
प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनले कसैले पनि अनुचित लाभ लिने नियतले बैङ्किङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा अवरोध खडा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाको विरुद्धमा यदि कोही कसैले त्यस्तो कार्य गर्छ भने त्यो गैरकानूनी हुन जान्छ । अहिले बैङ्किङ बजारमा देखापरेको जुन विवाद छ, त्यो विवादले बैङ्किङ प्रतिस्पर्धामा बाधा पुगेको हो वा होइन, केन्द्रीय बैङ्कले निक्र्योल गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हरेका क्षेत्रमा व्यावसायिक सङ्घसंस्था गठन हुने र त्यस्ता संस्थाहरूले सिण्डिकेट गरी प्रतिस्पर्धामा अवरोध खडा गरेर एकाधिकार कायम गर्न खोजेको पनि देखिन्छ ।
यदि बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भयो भने यसले एकातिर बैङ्किङ क्षेत्रको शाखमा नै असर पु¥याउन सक्छ भने अर्कातिर सर्वसाधारण जनताको बैङ्किङ क्षेत्रप्रतिको धारणामा नकारात्मक भावना ल्याउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको समयमा यस्तो परिस्थिति सृजना नहोस् भनी केन्द्रीय बैङ्क र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगत केही समयअघि निक्षेप कर्ताले न्यायोचित ब्याजदर पाउन नसकेकोमा हाल त्यसमा निकै सुधार भएको छ ।
यो बजारको माग तथा आपूर्तिको अवस्थाबाट सृजित प्रतिस्पर्धाबाट हुन सकेको छ । त्यसै भएर यसमा अवरोध पुर्‍याउने काम गर्न उचित हुँदैन । यदि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेपको उचित ब्याजदर पाउन नसकेमा यसले एकातिर अनौपचारिक क्षेत्रको खोजी गर्छ भने अर्कोतिर पूँजी पलायन पनि हुन सक्छ । तसर्थ केन्द्रीय बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो नहोस् भनी विशेष रूपमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क
तथा अध्यक्ष नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशन
केही दिनअघि बैङ्कहरूमा देखिएको विवाद अहिले शान्त भएको छ । एनआईसी एशिया बैङ्कले दिने ब्याजले बैङ्किङ प्रक्रिया र वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्छ भनेर नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनले कारोबार गर्दैनौं भनेका थियौं । तर, जसरी समाचारहरूमा सिण्डिकेट गरिएको भनेर आयो, त्यो गलत छ ।
ब्याज बढाउनु हुँदैन
पूर्वसंस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल बैङ्क
केही दिनअगाडि बैङ्कहरूबीच विवाद देखियो । कुनै लाभ लिन सकिने खालका सम्झौता भयो भने त्यसलाई सिण्डिकेट भन्न मिल्छ । तर, नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनले गरेको भद्रसहमति सिण्डिकेट होइन । कुनै बैङ्कले कर्जा स्वीकृत गर्दा निक्षेप परिचालनमा हुन सकिने कठिनाइ, ब्याजदर तथा निक्षेपको प्रकार (बचत वा मुद्दती प्रकारको निक्षेप) आदिलाई राम्ररी हिसाब गरेन भने यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
बैङ्कहरूले ब्याजदर कायम गर्दा म्याक्रो तथा माइक्रो इकोनोमिक्समा पर्न सकिने प्रभावलाई समेत ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यस्तै बैङ्क व्यवस्थापनलाई सञ्चालक तथा प्रमोटरहरूले ठूलो मुनाफाको लोभमा बैङ्कको पूँजी बढेको कारण अन्धाधुन्ध व्यापार बढाउन दबाब दिने अभ्यास रोक्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने काममा नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनले भद्रसहमति गर्ने चलन केही वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएको हो । बचतमा धेरै ब्याज दिँदा कर्जामा पनि धेरै ब्याज तोक्नुपर्ने बाध्यता बैङ्कहरूलाई हुन्छ ।
कर्जामा धेरै ब्याज लिँदा उद्योगीले सामानमा महँगो पार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसले गर्दा देशमा महँगी बढ्छ । बचतमा ब्याज बढाउँदा जम्मा गर्ने थोरैले लाभ लिन सक्थे तर महँगी बढ्दा समग्र देशकै नागरिकलाई त्यसको असर भोग्नुपर्छ । मुख्यतया पूर्वयोजना बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रोपावरले १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज धान्नै सक्दैन । त्यसमा अर्बौंको घाटा हुन्छ । अहिले नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनले बचतमा ८ प्रतिशत दिने र कर्जामा ११ प्रतिशत लिने भनेर भद्रसहमति गरेका छन् भन्ने सुनिएको छ । त्यो सहमति स्वागतयोग्य नै छ ।
एनआईसी एशियाले गरेको काम गलत
पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सनराइज बैङ्क
नेपालका बैङ्कहरूमा केही समययता तरलता अभाव देखिएको छ । निक्षेप वृद्धिको अवस्था स्थिर छ । बैङ्कको बचत स्थिर भएको अवस्थामा बचतकर्ताले एउटै डिपोजिट बैङ्कहरूको ब्याज वृद्धिका कारण कहिले कुन बैङ्कमा लगेर राखेको कहिले कुन बैङ्कमा लगेर राखेको अवस्था छ । यसले स्थिर रहेको निक्षेपमा ब्याज बढाउने मात्र काम गरेको छ । यसले कर्जा दिँदा ग्राहकलाई महँगो पर्न जान्छ । खुलाबजार अर्थतन्त्र भनेर मात्र हुँदैन । त्यसको पनि एउटा निश्चित नियमन हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने खुला बजार अर्थतन्त्रको पनि आफ्नो अनुशासन हुन्छ । बैङ्कको तर्क होला मैले किन ब्याज दर बढाउन नपाउने ? सधैं त्यस्तो खालको तर्कले काम गर्दैन । यसरी बैङ्कहरूले ब्याज बढाउँदै गएमा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भनेको उत्पादनमूलक र व्यावसायिक कार्य निर्बाध र सुचारू रहनु हो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै समस्या पार्छ । मसँग अमेरिका, सिङ्गापुर, अष्ट्रेलियालगायतमा काम गरेको अनुभव छ । त्यहाँको उदाहरण हेर्ने हो भने खुला अर्थतन्त्र भन्दैमा नेपालको जस्तो छैन । त्यहाँ अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने मापदण्ड भित्र मात्र बजार निर्धारण गरेको पाइन्छ । बचतमा धेरै ब्याज कायम भयो भने कर्जामा पनि धेरै ब्याज लिनुपर्छ । त्यसमा बैङ्कबाट कर्जा लिनेहरूलाई समस्या पर्न जान्छ । व्यवसायीले कर्जा पाउँदैन र पाए पनि महँगोमा पाउँछ । कर्जा लिनेले निश्चित योजना बनाएर काम गरेका हुन्छन् । ब्याजदर त्यसको अभिन्न अङ्ग हो । त्यसमा उसले योजना गरेको भन्दा धेरै ब्याज जोडियो भने, उद्योग व्यवसाय नै धराशयी हुन सक्छ । त्यसैले विषम परिस्थितिमा बैङ्कहरूले ब्याज बढाउनुभन्दा पनि यथास्थितिमै बस्न सक्नुपर्छ । समाचारमा के पनि आएको थियो भने प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नियम मिचेर एनआईसी एशिया बैङ्कसँग कारोबार नगर्ने भनेर नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनले निर्णय गर्‍यो । ऐन, नियम भनेको निरपेक्ष नभएर समय सापेक्ष पनि हुनुपर्छ । ऐनको प्रयोगका लागि पनि मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्ता विषयलाई आभ्यासिक र व्यावहारिक तरीकाले पनि हेरिनुपर्छ । मूलतः राष्ट्र बैङ्कले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत तोकिदिँदैमा असीमै लगेर राख्नुपर्छ भन्ने छैन । समय, काल, परिस्थितिअनुरूप बैङ्कहरूले त्यसलाई धान्न सक्नेसम्म राख्नु जरुरी थियो । परिस्थितिअनुरूप प्रतिस्पर्धीहरू पनि कहिलेकाहीँ सँगै हिँडेको राम्रो । किनकि त्यसबखत प्रतिस्पर्धा एकआपसमा होइन, परिस्थितिसँग हुन्छ । त्यसैले नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशन र विकास बैङ्कले गरेको सहमती राम्रो हो । एनआईसी एशियाले पनि त्यस सहमतिलाई व्यवहारमा लागू गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
बैङ्कहरू ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन्
कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
समाचारहरूमा एनआईसी एशिया बैङ्क र नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनका बीच विभिन्न विषयमा कुरा सुनिए तापनि औपचारिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कुनै पनि पक्षका तर्फबाट शिकायत आएको थिएन । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनौपचारिक रूपमा दुवै पक्षलाई सोमवार बोलाएर यो विषय यथासक्य छिटो टुङ्ग्याउन पहल गरेको थियो । छलफलका क्रममा एशोसिएशनका पदाधिकारीले एनआईसी एशिया बैङ्कसँग बैङ्किङ कारोबार गर्न जोखीम भएकाले कारोबार गर्न नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे । बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न नहुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । नेपालमा २०४६ साल भदौ १५ गतेदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्नमा स्वतन्त्र छन् ।